China SPC Floor 1903 Ukwakha kanye Factory | I-Aolong
Inqubo yokukhiqiza phansi ye-LVT: isici esikhulu senqubo yayo yokukhiqiza ukukhiqizwa kwesendlalelo ngasinye seshidi le-LVT, ngokuvamile elicutshungulwa libe ishidi elingu-0.8 ~ 1.5mm eliwugqinsi ngendlela "yokuxuba kwangaphakathi + kwe-calendering", bese lenziwa ubukhulu obudingekayo umkhiqizo osezingeni eliphansi ngokuhlangana nokucindezela okushisayo.
Inqubo yokukhiqiza phansi ye-WPC: kungabonakala kusukela kumdwebo wesakhiwo somkhiqizo ukuthi iphansi le-WPC liyisakhiwo esiyinhlanganisela esiqukethe i-LVT ne-WPC substrate. Inqubo yezobuchwepheshe imi ngale ndlela elandelayo: okokuqala, iphansi le-LVT elinokwakheka okukodwa kwenziwa, bese i-substrate ye-WPC ekhishiwe icindezelwa futhi yanamathiselwa nge-adhesive, futhi i-adhesive esetshenzisiwe ingcina yokunamathisela ebandayo.
Inqubo yokukhiqiza phansi ye-SPC: ifana ne-WPC floor base material, i-SPC base material iyakhishwa futhi ifakwe kukhalenda ebhodini le-extruder, bese linamathiselwe ngombala wefilimu nongqimba olungagqoki ebusweni. Uma kungu-ab noma i-ABA yesakhiwo se-SPC esiyinhlanganisela, okokusebenza kwe-SPC kukhishwa kuqala, bese kuthi ungqimba lwe-LVT lucindezelwe futhi lunamathiselwe ngendlela yenhlanganisela eluhlaza.
Lokhu okungenhla umehluko phakathi kokufakwa phansi kwe-LVT, i-WPC flooring ne-SPC. Lezi zinhlobo ezintathu ezintsha zephansi empeleni zitholakala ku-PVC flooring. Ngenxa yezinto zabo ezikhethekile, lezi zinhlobo ezintathu ezintsha zaphansi zisetshenziswa kakhulu kunaphansi kokhuni, futhi zithandwa kakhulu ezimakethe zase-Europe naseMelika, kanti imakethe yasekhaya isadinga ukwandiswa
Langaphambilini Isitezi se-SPC 1902
Olandelayo: SPC Phansi JD-060
Isitezi se-SPC 1906